Rooble oo loo soo gudbiyay magacyada xubnaha cabashada laga keenay | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble oo loo soo gudbiyay magacyada xubnaha cabashada laga keenay
Guddigii loo xil saaray xaqiijinta cabashada shakhsiyaadka ku jira guddiyada doorashooyinka ayaa soo saaray magacyada 67 ruux
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddigii Ra’iisul Wasaare Rooble u saaray xaqiijinta xubnaha cabashada laga qabo ee Guddiyada Doorashooyinka ayaa soo bandhigay magacyada 67 xubnood oo ay cabasho kamuujiyeen dhinacyada siyaasadeed.
Xubnaha magacyadooda lasoo gudbiyay ayaa intooda badan waxay ka tirsan yihiin hay'adda Nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee uu maamulo taliyaha awoodda badan ee Fahad Yaasiin.
Sidoo kale xubnaha qaar ayaa waxay ka tirsan yihiin shaqaalaha madaxtooyada iyo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha kuwaasoo dhammaantood loo arkay in ay kamid yihiin kooxda ka shaqeyneysa ololaha dib usoo doorashada Farmaajo.
Xubnaha ku jira guddiga ee cabashada laga keenay waxaa kaloo kamida koox baraha bulshada aad caan uga ah, kuwaasoo si aada ula dhacsan maamulka Farmaajo iyagana ay uqaabilsan yihiin dacaayadaha hawada la isku mariyo ee baraha bulshadu ku xiriirto.
Halkan hoose ka akhriso liiska magacyada xubnaha lasoo gudbiyay: